Amafulethi e-La Puntilla I - I-Airbnb
Amafulethi e-La Puntilla I
El Cotillo, Las Palmas, i-Spain
Amafulethi ase-La Puntilla atholakala ngqo ogwini lapho igama layo linikezwa khona.
Indawo enelungelo nezinyathelo ezimbalwa nje ukusuka ezitolo nasezitolo zokudlela endaweni. Itholakala esitezi sokuqala sesakhiwo esincane nesithule samafulethi angu-4.
Inophahla lwe-solarium enokubukeka okuhlaba umxhwele, ihlotshiswe ngama-sun lounger nama-shower. Ifulethi linekamelo elilala abantu ababili, indlu yangasese ephelele, igumbi lokuphumula elinovulande omncane nekhishi elinakho konke okudingekayo
Ifulethi lisesitezi sokuqala. Kuyadingeka ukukhuphuka izindiza ezimbili zezitebhisi.
Indawo eyaziwa ngokuthi i- "la punlla" inendawo enelungelo, hhayi nje ngokusondelana kwayo nolwandle kodwa nokusondelana kwayo nawo wonke amasevisi endaweni.
Hlola ezinye izinketho ezise- El Cotillo namaphethelo